एक भेडा चराउने बालिका पछि गएर कसरी बनिन् फ्रान्सको शिक्षामन्त्री ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
हाल सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले सानोमा भेडा चराउँदाको तस्बिरहरु भाइरल भइरहेको छ ।
यो सबैलाई प्रेरणा दिने नजाद भल्लाउद–बेल्कासेम, एक मोरोक्कोकी केटीको कथा हो जो आज फ्रान्सको शिक्षा मन्त्री बन्न सफल भएकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७७ मा नाडोरमा भएको थियो । बाल्यकालमा भेडा चराउने देखि अन्य कामहरु गरेकी नजादको संघर्षको कथाले धेरैलाई जीवन सफल बनाउन प्रेरणा दिने काम गरेको छ ।
उनको यस कथाले असम्भव भन्ने कुरा केही नरहेको र दृढशक्ति र विश्वासले हरेक समस्या जित्न सकिने बताउँछ ।
नजादले संघर्ष भन्ने कुरा ४ वर्षको कलिलो उमेरमा नै सिकिसकेकी थिइन् । उनी चार वर्षको छदाँ इनारबाट पानी ल्याउने काम गर्थिन् । मोरक्कोमा छदाँ नजादको पिताले निर्माणमा कामदारको रुपमा काम गर्थे ।
जब उनी चार वर्षको थिइन् तब उनको परिवार फ्रान्समा बसाइ सरेको थियो । त्यसपछि उनको जीवनमा झन् संघर्ष दिनहरु देखिए । उनलाई फ्रेन्च भाषा आउथेन । त्यसका कारण पनि उनी र उनको परिवारलाई अरुसँग वार्तालाप गर्न निकै कठिन भएको थियो ।
तर, असली हिरो झनै, उनले हार मानिनन् । उनी आफ्नो पढाइलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिन् । अन्ततः उनले फ्रेन्च भाषामा दख्खलता हासिल गरिन् । कलेजको पहिलो वर्षमा नै उनले आफुलाई निकै परिष्कृत गरिसकेकी थिइन् ।
अमिइन्स विश्वविद्यालयमा उनले राजनीति विषयमा पढ्न चासो देखाइन् । उच्च शिक्षाका लागि यो फ्रान्सको एउटा विशिष्ट इन्सिच्युट हो । यसपछि उनलाई राजनीतिप्रति बढी चासो हुन थाल्यो ।
कडा लगन र परिश्रमका कारण सन् २००२ मा उनले पेरिस इन्सिटुट अफ पोलिटिकल स्टडिजमा उनी ग्रयाजुएट भइन् । त्यसपछि उनी समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरिन् । उनले नागरिकका हक अधिकार, सुलभ घर तथा भेदभावविरुद्ध लड्न सुरु गरिन् ।
उनी काउन्सिलओमनको रुपमा रोन अलपिन्समा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले अफिसमा रहेर सन् २००८ सम्म काम गरिन् ।
सन् २००८ मा उनी काउन्सिल जनरल अफ द रोन डिपार्टमेन्टमा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि उनलाई राजनीतिमा चिनिन थाल्यो ।
सन् २०१२ मा उनलाई महिला अधिकार मन्त्री र प्रवक्ताको रुपमा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रपति होल्याण्डेले उनलाई चुनेका थिए ।
अन्ततः सन् २०१४ मा उनी शिक्षामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी हाल ३८ वर्षकी भएकी छिन् । फ्रान्सको पहिलो महिला शिक्षामन्त्री बन्न उनी सफल भएकी छिन् । – नेपालीपत्रबाट